WASIIRKA ARRIMAHA GUDAHA OO BEELIHII KU DAGAALAMAY CEEL-AFWAYN ISKU DHAARIYAY | Saxil News Network
WASIIRKA ARRIMAHA GUDAHA OO BEELIHII KU DAGAALAMAY CEEL-AFWAYN ISKU DHAARIYAY
Ceel-Afwayn(saxilnews.com)Waftida Wasiirka Arrrimaha Gudaha Somaliland Maxamed Kaahin Axmed Hogaaminayay Qaybna ay ka Ahaayeen Gudida Nabad Galyada Ee Golaha Guurtida ayaa maanta soo xidhay nabad deegaanka Ceel Afweyn ka dhalata, waxaana goobta labu dhaariyey Cuqaasha iyo dadkii wax ka dhinteen ee labada dhinac sidoo kale waxa la dhaariyey gudi xidhe ah oo ka kooban 15 toban ruux.
Madasha dhaarinta oo ka dhacday hoolka guriga martida ee degmada Ceel Afweyn ayaa waxa madasha kasoo qayb galay Maxkamada Degmada badhasaabka Gobolka wasiirka arrimaha gudaha , labada beelood ee diridtu dhex martay culimada haweenka , aqoon
yahanka, iyo dadkii dadkoodu dhinteen.
“Waxa laysla qaatay in nabada la xidho oo qolo walba laga dhaariyo 15 ruux, sidoo kale waxa la dhaariyey Dadkii dadkoodu ka dhinteen oo kala ahaa 8 iyo 7 ruux iyo qolada sadexaad oo ahayd xidhaha labada beelood oo laga soo xulay odayaasha Ceerigaabo.
Shirkan oo ku furmay jawi dagan ayaa ku dhamaaday xasilooni waxaana labada beelood markale lala balamay bari kulan garnaqsi ah oo qolo walba dhankeeda hadalka ka ciil bixi doonto isla markaana qoloda qaladku ku cadaado sharciga lamirin doono.
Goor Dhawr Warkan Oo Muuqaalo La Soco.